Ọrụ ntanetị | December 2019
Na-etinye foto na ntanetị
Enwere ọtụtụ ọrụ dị iche iche maka ịkọ foto, na-amalite site na mfe, haziri maka ọrụ a, na-ejedebe na ndị nchịkọta zuru ezu. Ịnwere ike ịnwale ọtụtụ nhọrọ ma họrọ otu ịchọrọ maka iji ya mee ihe. Ntughari nhọrọ Na nyocha a, a na - emetụta ọrụ dịgasị iche - nke mbụ, a ga - atụle oge ochie, ma jiri nke nta nke nta, anyị ga - aga n'ihu na ndị ka elu.
Gbanwee oge nke abụ ahụ n'ịntanetị
Mgbe ị na-arụ ọrụ egwu, ọ na-adịkarị mkpa iji ọsọ ma ọ bụ belata obere faịlụ faịlụ. Dịka ọmụmaatụ, onye ọrụ ahụ kwesịrị imegharị egwu ahụ na arụ ọrụ nke onye na-akpọ ụda olu, ma ọ bụ iji mee ka ụda ya dị mma. Ị nwere ike ịrụ ọrụ a na otu n'ime editọ ederede ọkachamara dịka Audacity ma ọ bụ Adobe Audition, ma ọ dị mfe iji ngwaọrụ weebụ pụrụ iche maka nke a.
Usoro Ntugharị Morse online
Code Morse bụ otu n'ime ụdị ndị kachasị ewu ewu nke mkpụrụedemede, nọmba na akara akara. Ntuchi na-eme site na iji akara ogologo na mkpụmkpụ, nke a na-ahọrọ dị ka isi na ncha. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ịkwụsị igosi nhapu nke mkpụrụ akwụkwọ. N'ihi ntụrụndụ nke ihe ntanetị pụrụ iche, ị nwere ike iji aka na-akọwagharị koodu Morse na Cyrillic, Latin, ma ọ bụ ọzọ.
Ịgụ faịlụ FB2 n'Ịntanet
Ugbu a, akwụkwọ kọmputa na-abịa iji dochie akwụkwọ akwụkwọ. Ndị ọrụ na-ebudata ha na kọmpụta, ama ma ọ bụ ngwaọrụ pụrụ iche iji gụkwuo akwụkwọ na ụdị dị iche iche. FB2 nwere ike ịpụta ọdịiche n'etiti ụdị data ọ bụla - ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu ma akwado ihe niile na mmemme.
Bipụta PDF na DWG n'ịntanetị
PDF bụ ụzọ nchịkọta kachasị ewu ewu maka ịchekwa ọdịnaya na ihe osise. N'ihi oke nkesa ya, ụdị akwụkwọ a nwere ike ile anya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ ọ bụla ma ọ bụ nke nwere ike ime - ọtụtụ ngwa maka nke a. Ma ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na e zitere gị ihe osise na faịlụ PDF, nke a ga-edezi?
Na-edezi koodu software n'Ịntanet
Onye mmemme ahụ anaghị enwe software pụrụ iche mgbe ọ bụla, site na nke ọ na-arụ ọrụ na koodu ahụ. Ọ bụrụ na ọ na-eme na ịkwesịrị idezi koodu ahụ, na ngwanrọ kwekọrọ na ọ dịghị nso, ịnwere ike iji ọrụ ịntanetị na-enweghị ike. Anyị ga-ekwukwa banyere saịtị abụọ dị otú ahụ ma nyochaa usoro nke ọrụ n'ime ha.
The keyboard bụ isi ngwaọrụ maka ịbanye ozi n'ime PC ma ọ bụ laptọọpụ. Na usoro nke na-arụ ọrụ na manipulator, oge na-adịghị mma nwere ike ibute mgbe mkpịsị ugodi ahụ ejiri aka, ọ bụghị mkpụrụ edemede anyị na-abanye abanye, na ihe ndị ọzọ. Iji dozie nsogbu a, ịkwesịrị ịmara kpọmkwem ihe ọ bụ: na ngwaọrụ nke ngwa ntinye ma ọ bụ ngwanrọ nke ị pịnyere ederede ahụ.
Ịgbakwunye egwu na vidiyo na ntanetị
Nhọrọ chopụtara nke ọma nwere ike ịbụ nnukwu mgbakwunye na ihe ọ bụla vidio, n'agbanyeghị ọdịnaya ya. Ịnwere ike ịgbakwunye ọdịda site na iji mmemme pụrụ iche ma ọ bụ ọrụ ntanetị na-enye gị ohere idezi vidio. Na-agbakwunye egwu na vidio vidio E nwere ọtụtụ ndị editọ vidio n'ịntanetị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha nile nwere ọrụ iji tinye egwu na-akpaghị aka.
Gwa foto PNG na JPG n'ịntanetị
E nwere ọtụtụ ụdị ihe oyiyi a na-ewu ewu nke ndị ọrụ na-ejikarị eme ihe. Ha niile dị iche na njirimara ha ma dị mma maka ebumnuche dị iche iche. Ya mere, mgbe ụfọdụ, ọ dị mkpa iji tọghata faịlụ site n'otu ụdị gaa na nke ọzọ. N'ezie, enwere ike ime nke a site n'enyemaka nke mmemme pụrụ iche, ma nke a anaghị adị mfe.
Mepee DOCX faịlụ online
Ọ na-emekarị na ịkwesịrị ịmepe akwụkwọ ụfọdụ ngwa ngwa, ma ọ dịghị ihe omume dị mkpa na kọmputa ahụ. Nhọrọ kachasịsịsịsị bụ enweghị ọrụ ụlọọrụ Microsoft arụnyere na, n'ihi ya, enweghị ike iji faịlụ dOCX rụọ ọrụ. N'ụzọ dị mma, enwere ike idozi nsogbu ahụ site na iji ọrụ Ịntanetị kwesịrị ekwesị.
Esi edeba aha n'igwe
Akwụkwọ ọnụahịa - akwụkwọ ego ụtụ pụrụ iche nke na-egosi na ọ bụ ndị ahịa ahụ na-ebufe ngwaahịa ahụ, ntinye ọrụ na ịkwụ ụgwọ maka ngwaahịa. Na mgbanwe nke iwu ụtụ isi, usoro nke akwụkwọ a na-agbanwe. Ịnyocha ihe niile gbanwere bụ ihe siri ike. Ọ bụrụ na ịghị eme atụmatụ ịbanye n'ime iwu ahụ, kama ịchọrọ ịmejupụta akwụkwọ ọnụahịa ahụ n'ụzọ ziri ezi, jiri otu n'ime ọrụ ịntanetị akọwapụtara n'okpuru.
Esi mee ka a tọghata CR2 na faịlụ JPG na weebụ
Mgbe ụfọdụ, enwere ọnọdụ mgbe ịkwesịrị imeghe ihe oyiyi CR2, mana onye nyocha foto wee ghọọ os n'ihi ihe ụfọdụ mere mkpesa banyere ndọtị amaghị. CR2 - nchịkọta foto, ebe ị nwere ike ịlele ozi gbasara njedebe nke onyinyo ahụ na ọnọdụ nke usoro ịgba égbè ahụ mere. Mgbakwunye a mepụtara site na onye na-emepụta ihe osise nke a ma ama iji gbochie ọdịdị oyiyi.
Otu esi mepee faịlụ DWG na weebụ
Ntuziaka na DWG usoro - eserese, ma akụkụ abụọ na akụkụ atọ, nke a na-eji iji AutoCAD. Mgbatị ahụ n'onwe ya na-anọchi anya "ịbịaru." Enwere ike mepee faịlụ aghara maka ịlele ma dezie site na iji ngwanrọ pụrụ iche. Ebe ị na-arụ ọrụ na faịlụ DWG Ịchọghị ibudata ngwanrọ maka ịrụ ọrụ na draịvụ DWG na kọmputa gị?
Kedu esi kpoo foto abụọ n'ime otu online
Ịgbanye foto abụọ ma ọ bụ karịa na otu ihe oyiyi bụ àgwà mara mma nke a na-eji na-emepụta foto mgbe ị na-emepụta ihe oyiyi. Ị nwere ike jikọọ foto dị na Photoshop, ma usoro a dị nnọọ mfe nghọta, na mgbakwunye, ọ na-achọ ihe onwunwe kọmputa.
Ọrụ ịntanetị maka ịtụgharị faịlụ XLSX na XLS
Ọ bụrụ na ịchọrọ imeghe faịlụ XLSX na nchịkọta akụkọ spreadsheet Excel karịa afọ 2007, akwụkwọ ahụ ga-agbanwe na nhazi mbụ - XLS. A pụrụ ime mgbanwe a site na iji usoro kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ozugbo na nchọgharị - online. Otu esi eme nke a, anyi ga-agwa ya n'isiokwu a.
Gbanwee obere vidiyo n'igwe
Mgbe ụfọdụ, olu ụda akụrụngwa adịghị ezuru igwu vidio dị jụụ. Na nke a, ọ bụ naanị ngwanro ahụ ka ụda olu ga-enyere aka. Enwere ike ime nke a site n'enyemaka nke mmemme pụrụ iche, mana ọ ga-adị ngwa ngwa iji ọrụ pụrụ iche n'ịntanetị, nke a ga-atụle mgbe e mesịrị.
TIFF tọghata na PDF online
Mgbe ịgụ isiokwu ma ọ bụ ịmata ọdịnaya nke akwụkwọ akwụkwọ na eserese a na-ebipụta, a na - etinyekarị ya na setịpụrụ ihe oyiyi dị iche iche - TIFF. Ọ bụ ndị editọ na-ese foto na ndị na-ekiri foto na-akwado usoro a. Ihe ọzọ bụ na faịlụ dị otú ahụ, iji mee ka ọ dị nwayọọ, adighi mma maka izipụ ma mepee na ngwaọrụ ndị nwere ike ịnwe.
Mepụta akwụkwọ nta online
Iji mee ka ndị na-ege ntị na-ahụ maka ọrụ na ọrụ na-ejikarị ụdị ngwaahịa mbipụta dị otú ahụ dị ka akwụkwọ nta. Ha na-adabere na akụkụ abụọ, atọ ma ọ bụ ọbụna karị. A na-etinye ozi na nke ọ bụla n'ime ha: ederede, ihe nkiri ma ọ bụ jikọtara. A na - eji akwụkwọ nta iche iche rụọ ọrụ site na iji ngwanrọ pụrụ iche iji rụọ ọrụ dị ka Microsoft Office Publisher, Scribus, FinePrint, wdg.
Gwa WAV na MP3
Mgbe ụfọdụ, ịchọrọ ịnyefe faịlụ ọdịyo na WAV MP3 format, ọtụtụ mgbe n'ihi n'eziokwu na ọ na-ewe ọtụtụ ohere disk ma ọ bụ igwu egwu na ihe ọkpụkpọ MP3. N'okwu ndị dị otú ahụ, ị ​​nwere ike iji ọrụ ntanetị nwere ike iji arụ ọrụ a, nke na-azọpụta gị site na itinye ndị ọzọ ngwa na PC gị.
Kedu esi emepụta kaadị azụmahịa na weebụ
Kaadị azụmahịa - ngwá ọrụ bụ ịkwasa ụlọ ọrụ na ọrụ ya na ndị ahịa. Ịnwere ike ịnye kaadị azụmahịa gị n'aka ụlọ ọrụ ndị ọkachamara na mgbasa ozi na imewe. Kwadebe maka eziokwu ahụ na ngwaahịa ndị a na-ebipụta akwụkwọ ga-efu ọtụtụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ha na onye ọ bụla na nke a pụrụ iche.